PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - Kwakuyoba ngcono ukuba kwakuvotelwa ubuholi: Madondo
Kwakuyoba ngcono ukuba kwakuvotelwa ubuholi: Madondo
Isolezwe - 2018-04-16 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI
IPHINI leNhloko yamaJaji KwaZulu-Natal, u-Isaac Madondo, lithi ukuba bekuya ngalo ngabe umholi webandla lakwaShembe uyavotelwa ukuze kuphele ukukhuluma.
UMadondo usho lokhu ngesikhathi ekhipha isinqumo ngalolu daba ngoLwesihlanu eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu.
Uvune abaseThembezinhle wangahambisana nabaseBuhleni abahambisana noMnuz Mduduzi “Unyazi lwezulu” Shembe.
Icala laliqale eNkantolo eNkulu eThekwini lapho lafika lavuna abaseThembezinhle kodwa abaseBuhleni balidlulisa bekhala ngokuthi obunye ubufakazi bunyatheliwe.
Umbango uqale emuva kokukhothama komholi webandla inkosi Vimbeni “Uthingolwenkosana’’ Shembe. IJaji litshele amalungu ebandla ukuthi lizamile ukuwuzwakalisa umbono wokuvota kwamanye amajaji abecubungula udaba kodwa lakhala ngaphansi ngenxa yeningi.
UMadondo ubehlalele udaba namaJaji uPortia Poyo -Dlwati noJerome Mnguni okuyibona abachithe umbono kaMadondo ngokuba yiningi.
“Enye indlela ebizoqeda ukukhuluma wukuthi isigungu esiphezulu sebandla sivote ngokuyimfihlo sikhethe umholi webandla. Lolo khetho bekuyomele lwenganyelwe yinhlangano ezimele njenge-IEC ukuze kuqinisekiswe ukuthi konke kuhamba kahle,’’ kusho uMadondo.
Uveze ukuthi umbono wakhe ubuyokwesekwa ukube umthethosisekelo webandla uyasinika isigungu esiphezulu amandla okuba siqoke umholi uma kwenzeka isikhundla singabi namuntu kungacaci ukuthi ngubani umholi.
Uthe isigungu esimeni esinjalo kusuke kufanele sisingathe umsebenzi ngokucophelela nangeqiniso.
Uthe kodwa lokho belikuveza njengeseluleko kodwa isinqumo sokunqoba kwabaseThembezinhle simile asishintshi.
Okunye okuqaphelekile ecaleni wukuthi isasasa lamalungu ebandla, ikakhulukazi aseBuhleni, bese lehlile uma kuqhathaniswa nangesikhathi icala lisahlala eNkantolo eNkulu eThekwini.
Ngaleso sikhathi babephuma ngobuningi kube mhlophe idolobha. Abaholi bezinhlangothi zombili bebengabonwa nangokhalo enkantolo kanti eThekwini babeke babonakale bezothamela icala. Akukacaci ukuthi yiliphi igxathu elizothathwa ngoba abeseBuhleni bethe basazodla amathambo engqondo ngodaba.